Hiran State - News: Fashilka siyaasadeed ee Shariif Shiikh Ahmed ma u horseedi doonaa wadanka in ay doorshao ka dhacdo si looga baxo xiliga kumeel gaarka?
Fashilka siyaasadeed ee Shariif Shiikh Ahmed ma u horseedi doonaa wadanka in ay doorshao ka dhacdo si looga baxo xiliga kumeel gaarka?
HS:-Fashilka siyaasadeed ee Shariif Shiikh Ahmed ma u horseedi doonaa wadanka in ay doorsho ka dhacdo si looga baxo xiliga kumeel gaarka?
Inkasta oo ay dad badan u qaadan karaan marka laga hadlo siyaasada Shiikh Shariif in isaga si shaqsi ah looga soo horjeedo amaba beel ahaan maadama qaabka uu siyaasada ku soo galayba aheyd nidaam qabiil ku dhisnaa oo aan diin iyo Alla ka cabsi shaqo ku laheyn, hadane bal aan dul marno qaabka uu Shariifka ugu fashilmay siyaasadahan cusub iyo kuwii ka horeeyey.
Su,aasha ugu horeysa ayaa ah yaa la taliye u ah Shariifka maxaase mudadii uu joogay keenay in ay aad u bataan qilaafka TFGda kadibna R/wasaare kasta loo ceyriyaa amaba halkii shacabka loo maciini lahaa loo kala diraa xukumad kasta?
Hadaan soo koobno waa marka horee ma jirto cid rasmi lataliye ugu ah .waxuu markasta taladooda ka dhageystaa hadba qofkii amaana ee yiraahda waxaad tahay hogamiye fiican iyo beesha adigoo kale wali ma soo marin iyo wax la mid ah meeqa R/wasaare oo Daarood ah ayaad ceyrisay libaax cida u soo baxay iyo wax la mid ah. sidoo kale ma jirto wax siyaasad ah oo isaga u bilaaban waxuuna markasta aaminsan yahay sidii ay qaskan u wadi lahayeen Shabaab iyo waxii la hal maala maadama uu isagu madax ku noqday dhaqanadii guracnaa iyo kacdoonkii ujeedada badnaa ee maxkamadaha waxuu u heystaa inuu meesha ka baxayo hadii dalka ka dhacdo nabadgalyo leysku haleyn karo.
Isaga iyo kooxdiisa amaba kuwa xeyndaabkiisa jooga runta iskuma sheegaan oo ma doonayaan in wadanka laga saaro xiliga kumeel gaarka waxeyna isku mashquuliyaan wax aan dadka Somaliyeed aysanba dan ugu jirin waayo waxey iska indho tirayaan xitaa in lagu dhaqmo 10% ka mid ah Dastuurkii lagu qoray Kenya 2004kii oo aan marnaba ilaa maanta laga hadleyn amaba leysku dayeen in laga dhaqan galiyo labada qodob ee ugu muhiimsan sida.
1- Inta aan wax kale la sameyn waxey aheyd in xooga la saaro nabadgalyada guud ee dalka lana sugo muwaadinkasta oo Somaliyeed nabadgalyadiisa si taasi loo helane waxey aheyd in la dhiso ciidamo Somaliyeed oo awood leh oo loogu yeero ciidamada xooga dalka Somaliyeed iyo qeybaha kale sida booliska iyo waxii la hal maala.
2-Waxaa lagu booday Dastuur loogu magac daray qabyo qoraal amaba Road Map oo aan hadii leysku qabto loo dhisin ciidankii xooga dalka ee lagu laaban lahaa oo sharcigaas hadii la jabiyo ilaalin lahaa sida Dastuurkii Kenya lagu qoray cadeynayo waaba hadii isagaas xitaa lagu dhaqmayee.
3- Shacabkii dastuurkaan codka loo weydiin lahaa oo ay degaanadooda ka taliyaan kooxo argagixiso ah loona heyn in afti la weydiiyo. waxaa kale taasi ka sii daran TFGda hada jirta sharciyan maba ahan mid jirta waayo waxey jabiyeen xeerkii la doonayey in loogu dhaqmo si kumeel gaar ah waxaana tiro labo jeer ah la kordhiyey tirada baarlamanka oo uu dastuurku leyahay lama kordhin karo tirada iyo waqtiga uuku egyahay ee 5ta sano.
4- TFGda waqtigeeda waxuu ku ekaa sanad ka hor shirarkaan Kampala iyo Mogdisho lagu qabanayo waa wax ay iska dhoodhoobeen dowlado dano fog iyo mid soke ka leh shacabka Somaliya.
Hadaba intaasi oo qodob oo siyaasad xumo ah xakuu ku daneyn doonaa Shariifka Shiikh Ahmed maadaama Shariifkii kale ee baarlamanka si rasmi ah ugu fashilmay siyaasada kadib markii beelaha Digil iyo Mirifle kalsoonidii kala laabteen kana gaabsadeen iney xitaa hor fashiistaan xili uu safaro ku yimid Mareykanka iyo Yurub, Shiikh Shariif isagu fashilkiisa waa mid qatartiisa leh lagana yaabo hadii waqtiga u haray ka dhamaado iyadoo wadanka fowdadaan ku jiro iney ku adkaan doono sidii uu aduunyada si nabad ah ugu noolaado waa marka u fowdo in lagu sii jiro oo shacabkii oo dhamanayo ku mashquulo R/wasaare ceyris iyo xukumad kala dirid.
Hadiise uu xilkasnimo sameeyo oo uu ku dhabar adeygo sidii wadanka looga saari lahaa xiliga kumeel gaarka oo meesha dhan ka saareyso iney ciidamo iska socda oo dowlado kale ka yimid wadanka jiho kasta ka soo galaan.nasiib wanaag raga hada siyaasada horboodayo amaba xiliyadii kumeel gaarka nasiibka u yeeshey iney Somaliya xil ka qabtaan Allaah wuu garadsiin waaayey iney xooga saaraan sidii wadanka looga saari lahaa kumeel gaarka oo ah dhibaatada ugu weyn ee dalkeena heysata.
Dhinaca kale Shariifka siyaasad xumo iyo damiir xumo heerka uu ka gaaray madaxweyneyaal maamul goboleed ayaa heshiisyo la soo galaya dowlado shisheeye ah oo iyagoo waftiyo hogaaminaya degaanadooda ka soo dejinaya isagoo masuuliyad guud ku magacaaban kuna faraxsan dhawrka KM ee ay ku waardiyeeyaan Amisom. bal ka waran isagoo jiifa hadii Amisom dowladaha Mogdisho ku biila isaga iyo ciidamadaas si lama filaan ah uga jaraan mushaarka xakee ka kenayaa Taanki uu ku tago Airoportiga amaba degmada Karaan?inta maanta hor boodeyso siyaasada tiro yar oo ku adkeysan doonta in wadanka laga saaro xiliga kumeel gaarka oo doorasho la qabto ayaa ugu danbeyn shacabka kasban doonta.
Qaran Somaliyed waxaad ka sabreysaa markaad xarunta Villa Somaliya tagto waxaad ku arkeysaa dhalinyaro marna galaya xafiiska madaxweynaha, marna galaya midka R/wasaaraha marna galaya midka gudoomiyaha baarlamanka dhamaantoodna wadanka sirtiisa ayey siyaabo kala duwan ugu faafiyaan dunida dacaladeeda ayuu yiri mid ka mid ah siyaasiyiintii hore ee dalka soo maray oo Mogdisho tagay xilidhaw waxuuna hadalkiisa ku soo qatimay hanaan dowladeed Shariif iyo dhalinyaradan ka cararay wadamadii ay Ceyrta ka qaadanayeen dowaldnimo kama soo dhawa.
Isku soo duuboo Shariifka xaalkiisu waa neef gowracan geed kama waabto mana lahan la taliyaal wadani ah oo runta u sheega isaguna umaba bilaawna wax siyaasad ah oo dalka iyo dadka lagu bad baadin karo waa fowdo u joog xili kasta shacabkii goboaldane mar hore kala tageen intooda badan oo kuwa Jubooyinka ayaa hada ugu danbeeya isma hayaan.
Waxaa Shiikha loo qaatay inuusan u bareerin qilaaf hor leh ee uu ku adkeysto doorasho iney wadanka ka dhacdo hadii kale riyada Ismaaciil Cumar Geelle oo leh ciidamo ayaan kuu soo dirayaa oo isaguba wadanka ku hayaan ciidamo faransiis ah ha ku jiro ee meelaha haka dhaho dowladaha deriska wey ku soo xad gudbeen dalkeena iyadoo Shabaab la wiiqayo. ciidankasta oo maanta gudaha Somaliya amaba Bada jooga waxaa ku failan amaba ka adag dowlad aan kumeel gaar aheyn oo tiraahdo waa iney ka baxaan dalkeena iyo wax la mid ah . laakisne TFG aan xitaa heshiisyo caalami ah gali karin oo uusan warkeedu ka soconeyn meelo badan oo dalka ka mid ah in uu Shariifka waqti iskaka lumiyo waxey qeyb ka tahay siyaasad xumida iyo fashilka ka heysta dhinaca la talinta.
· admin on October 29 2011 12:12:26 · 0 Comments · 2242 Reads ·
14,586,098 unique visits